Saameynta ku socoshada caalamiga ah ee barnaamijka moobiilkaaga | Martech Zone
Talaado, Maarso 22, 2016 Talaado, Maarso 22, 2016 Douglas Karr
Adiga oo leh 7,000 luqadood oo adduunka ah iyo koritaanka caalamiga ah ee barnaamijyada moobiilka, waxaad u badan tahay inaad iska iibinaysid wax yar haddii aad suuqa la gasho barnaamij aan taageereynin deegaanka. Si xiiso leh ayaa ku filan, barnaamijyada moobiilka ee taageera Ingiriisiga, Isbaanishka, iyo Mandarin Shiinaha, waxay gaari karaan adduunka badhkiis
Waxaa muhiim ah in la ogaado in 72% adeegsadayaasha barnaamijku aysan ahayn kuwa ku hadla Afka Ingiriiska! app Annie la helay markii barnaamijka mobilada loogu wanaajiyay suuqyada caalamiga ah, waxay keentay 120% dakhli badan iyo 26% soo dejin guud ahaan. Taasi waa soocelin wanaagsan oo ku saabsan maalgashiga oo lagu daro awoodda lagu qeexi karo laguna taageeri karo luqado kala duwan bilowgii.
Faahfaahintan ka timid Tbini'aadanka waxay ku talinaysaa shirkadaha inay baaraan wadamada barnaamijkoodu ka tartami karo, dhaqan ahaan la aqbali karo, isla markaana qiime fiican looga heli karo dhagaystayaasha. Infographic wuxuu leeyahay talooyin aad uwanaagsan oo ku saabsan suuqgeynta barnaamijkaaga moobiilka gobol ahaan iyo waliba raadinta iyo kanaalada bulshada maadaama qaar ka mid ah suuqyada aan la heli karin.
Tags: barnaamijka anniecaalamiluqadooddegaankaapp mobilebarnaamijyada mobilada soo degsadasoo degsada dalabka mobiladaapps mobileluqadaha ugu caansantarjuma bini'aadamkatarjumaada